“Toban kooxood ayaa iibsan kara Erling Haaland oo Afar ka mid ah ay yihiin England.” – Mino Raiola – Gool FM
(Yurub) 24 Feb 2021. Wakiilka caanka ah ee ciyaartoyda Mino Raiola ayaa ka hadlay mustaqbalka xiddiga uu dalaalka ka yahay ee Erling Haaland, isagoo sheegy in lala xiriirinayo ilaa iyo 10 kooxood oo waa weyn, marka loo eego qaab ciyaaredkiisa cajiibka ah uu ka sameeyay horyaalka Bundesliga iyo tartanka UEFA Champions League.
Erling Haaland wuxuu noqon doonaa xidigga “jiilka cusub” ee ciyaartooyda kubadda cagta, sida uu sheegayo Mino Raiola, oo carabka ku adkeeyay inay jiraan 10 koox oo adduunka ah oo awood u leh inay la saxiixdaan weeraryahanka Borussia Dortmund.
Haddaba Mino Raiola ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay mustaqbalka weeraryahanka Borussia Dortmund ee Erling Haaland, wuxuuna yiri:
“Way iska cadahay in qof walba uu u arko Erling Haaland mid ka mid ah xiddigaha mustaqbalka, sababtoo ah waa wax aad u adag in la sameeyo waxa uu ku sameeynayo da’adan.”
“Wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah xiddigaha mustaqbalka tobanka sano ee soo socda, sababtoo ah waxaan aragnaa in xiddigaha sida Ibrahimovic, Ronaldo iyo Messi ay gaareen da’a qof walba uu isweydiiyo, (Ilaa goorma ayaan ku raaxeysan karnaa iyaga?) Marka qof walba wuxuu raadinayaa jiilka cusub.”
“Kaliya ugu badnaan 10 kooxood ayaa iibsan kara Erling Haaland, afar ka mid ah kooxahan waa kuwa ugu firfircoon horyaalka Ingiriiska, mana u maleynayo inuu jiro agaasime isboorti ama tababare adduunka ah ee sheegi doono inuusan xiiseyneynin saxiixiisa, waxayna la mid tahay kooxda Formula 1 ah inay dhahdo ma xiiseynayo qandaraaska Lewis Hamilton?.”
Kooxaha Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Barcelona, ​​Real Madrid, Paris St Germain, Juventus iyo Bayern Munich, waa kooxaha ugu caansan ee doonaya inay qandaraas la galaan Erling Haaland, taasoo ka dhigi doonto suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda inuu noqdo mid aad u kulul.